Sodàna: Hiteraka fanjakana vaovao ve i Afrika amin’ny 2011? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2011 8:26 GMT
Hiteraka fanjakana vaovao ve i Afrika amin'ny 2011? Hanao fitsapan-kevi-bahoaka i Sodàna Atsimo na hoe hijanona na tsia ho faritr'i Sodàna izy amin'ny 9 Janoary 2011 araka ny ao anatin'ny Fifanarahana Ankapobeny ho amin'ny Fandriam-pahalemana tamin'ny 2005 teo amin'ny governemanta foibe ao Khartoum sy ny Hetsi-panafahan'ny Vahoaka ao Sodàna. Fitsapankevi-bahoaka iray koa no hatao amin'io fotoana io ihany any Abyei mikasika ny hoe ho lasa faritr'i Sodàna Tatsimo na tsia. Ireto misy fehina lahatsoratra miresaka an'i Sodàna eo amin'ny sampanan-dalan'ny tantara.
Miaro ny heviny izy fa hoe mety hiteraka herisetra ny fitsapankevi-bahoaka any Abyei. Faritra any Sodàna i Abyei ary manana “sata ara-taratasy manokana,”
Manoratra mikasika ny solika sy ny fitsapankevi-bahoaka i Luke A. Patey, Mpikaroka amina tetikasa ao amin'ny Ivontoerana Danoa ho an'ny Fianarana Iraisam-pirenena:
Milaza izy fa mety ho antony iray mampisara-bazana ny solika ao anatina Sodàna Atsimo mahaleotena :
Manoritra faritra mena (mafàna) any Atsimon'i Sodàna izy:
Farany, miresaka mikasika ny fikarohana anarana vaovao eo amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Juwama vs. ny Repoblikan'i Nile – mitady anarana vaovao i Sodàna Atsimo” i Andrew Heavens: